Midika izany fa risika tokoa ny fifampikasohana any an-tsekoly ao anatin’izao vanim-potoan’ny valan’aretina izao. Ho an’ireo kilasim-panadinana anefa dia tsy maintsy manohy ny fampianarana foana ihany izy ireo amin’izao fotoana izao. Mitebiteby ny ray aman-dreny manoloana izany. Ireto ny torohevitra mahasoa, hamaha izay olanao izay.
Ampahafantaro azy tsara ilay aretina
Aza alefa any an-tsekoly ny zanakao raha mbola tsy mahafehy tsara ara-pratika ny mikasika ny Coronavirus izay misy eto amintsika. Toy ny hoe Virosy ity Covid-19 ity ka mifindra amin’ny alalan’ny piti-drora sy ny fifampikasohana. Mety hipetapetaka eny rehetra eny ny piti-droran’ireo marary tsy mahatandrina ka izany no mila hanasana tanana matetika sao sanatria nifanena tamin’ilay virosy izy. Izany koa no tsy azo hikasihana orona, vava, maso sao tafiditra any ilay virosy ary ny aron-tava indray dia sady miaro ny namany no miaro azy koa…
Misy fihetsika tsy nahy anefa
Na efa hay tsianjery aza anefa ireo fahalalana fototra ireo, dia mila hain’ireo ankizy ara-pratika koa fa misy fihetsika mahazatra fanao any an-tsekoly mety hahavoan’ny Covid-19. Anisan’ireny izao ny fifampihindramana fitaovam-pianarana, indrindra raha misy nanala aron-tava ka manaikitra “stylo”. Toy izany koa ny “gaoma” izay misy piti-drora matetika… Ankoatra izay dia mety hampifamindra Coronavirus koa raha sanatria misy voa ao am-pianarana ny mifampizara ody ambavafo sy ny fanandramana ny “gouter” an’ny namana. Tafiditra ao anatin’izany koa ireo lalao ara-panabeazana na kilalao fanao rehefa maka rivotra izay misy mifandray tanana, na manapasipasy zavatra toy ny baolina. Izany rehetra anefa dia tsy voatery ho voahajan’ireo ankizy, ka andraikitry ny mpanabe sy ny sekoly ny manara-maso sy manoro izany.
Atoroy azy ary zarao any an-tsekoly ireo fahazarana vaovao
- Manasa tanana amin’ny savony na ny “gel hydroalcoolique” mandritra ny 30s rehefa : hiditra eo am-bavahadim-pianarana ; isaky ny avy manintsin-delo amin’ny mosoara ; mialoha ny hihinana “gouter” ; rehefa tapitra ny fakan-drivotra ; rehefa avy any amin’ny toeram-pivoahana ; mialoha ny handeha hody amin’ny firavana
- Mosoara taratasy no ampiasaina, ary isaky ny avy mampiasa dia aterina ao amin’ny fako avy hatrany izany fa tsy apetraka eo ambony latabatra na any anaty paosy sy kitapo
- Isaky ny mihevina sy mikohaka dia tsy esorina ny aron-tava ary ao anaty sandry izany no atao
- Tsy mikasikasika tarehy mihitsy
- Tsy mihinana sakafo afa-tsy izay nentina avy any an-trano, ary tsy mizara ihany koa na dia fanao aza izany taloha
- Tsy mampihindrana fitaovana
- Tsy mikasika rindrina sy tohatra mihitsy fa atao any am-paosy foana ny tanana